ဟော်တယ်ခန်းတွေကို လူနာဆောင်ပြောင်းပစ်မယ့် ယူကေရဲ့ ပြင်ဆင်မှု
ဟော်တယ်ခန်းတွေကို လူနာဆောင်ပြောင်းပစ်မယ့် ယူကေရဲ့...
16 มี.ค. 2563 - 08:53 น.
လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးထားတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ မရှိမဖြစ် အရေးပါ
ယူကေမှာ စစ်ပြီးခေတ်နောက်ပိုင်းအတွင်း အံမခန်းထူးခြားလောက်တဲ့ အစီအမံတွေနဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့ပွားမှု ပြဿနာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး မတ်ထ် ဟန်းကော့ခ် က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ အတွင်း ပြောင်းလဲ လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးက ချပြခဲ့ပါတယ်။
၁။ ဟော်တယ်ခန်းတွေ လူနာ ကုသဆောင် ဖြစ်လာတော့မလား
နိုင်ငံတလွှား ဧည့်သည်လွတ်နေတဲ့ ဟော်တယ် ခန်းတွေမှာ လူနာတွေ ထားရှိသွားမယ်လို့ ၀န်ကြီးက ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ လူနာတွေ အများအပြား ကျလာလို့ လက်ရှိ ဆေးရုံတွေမှာ ထားဖို့ မလုံလောက်ရင် ဆေးရုံသစ် ထပ်ဆောက်မှာလားလို့ လူတချို့က မေးလေ့ရှိကြောင်း ၊ အခုဆိုရင် ဟော်တယ်လွတ်တွေ အများကြီး တွေ့ရတဲ့ အတွက် ဒီနေရာတွေမှာ လူနာထားဖို့ အဆင်သင့် သုံးလို့ရတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိကြောင်း မက်ထ် ဟန်းကော့ခ်က ဘီဘီစီရဲ့ အင်ဒရူးမား ဆွေးနွေးခန်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဆေးရုံတွေမှာကော အရပ်ဖက် လူနာတွေ ထားဖို့ ရှိသလား ဆိုတဲ့ အမေးကို ဖြေကြားရာမှာ ဖြစ်နိုင်တာ အားလုံးကို လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ သူက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
လူနာတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ထားမလဲ ဆိုတာထက် လူနာတွေ အရမ်းကျလာရင် ပစ္စည်း ကိရိယာ နဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း လုံလောက်ပါ့မလား ဆိုတာကို သူ့အနေနဲ့ ပိုမို စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စက ဟော်တယ်တွေမှာ လူနာထားရင် အောက်စီဂျင် ပေးဖို့ ၊ အသက်ရှူစက်တွေ အလုံအလောက် ထားပေးဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ နေရာမှာလည်း အားပြင်းတဲ့ အသက်ရှူစက် လိုသလား ဒါမှမဟုတ် ခွဲခန်းသုံး မျက်နှာဖုံး နဲ့တင် လုံလောက်သလား ဆိုတာလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူနာတွေထားဖို့ နေရာသာမက သူတို့ အတွက် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စက်ကိရိယာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပြီးသား ဝန်ထမ်းတွေ ထားရှိပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး မတ်ထ် ဟန်းကော့ခ် က ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ဆေးခန်းတွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီ
Best Western ဆိုတဲ့ ဟော်တယ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကတော့ သူတို့ပိုင် ဟော်တယ် တချို့မှာ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ကြီးကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ ယာယီ ဆေးရုံ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို လာမယ့် သီတင်းပတ် အတွင်းမှာ သူတို့ ကုမ္ပဏီက ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲ Rob Paterson က ပြောပြီး အမျိုးသားရေးမှာ ထင်မှတ် မထားတဲ့ အကူအညီတွေ ပေးသွားဖို့ ဆန္ဒ ရှိတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ပြဿနာကြောင့် သူတို့ ကုမ္ပဏီပိုင် ဟော်တယ် တွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လကတည်းက လာရောက်တည်းခိုမယ့် အစီအစဉ်တွေ ဖျက်သိမ်းမှု တိုးလာနေတယ်လို့ Best Western ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
၂။ ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံလား ပုဂ္ဂလိကပိုင်လား
အတိုက်အခံ လေဘာ ပါတီနဲ့ GMB သမဂ္ဂ အဖွဲ့ကတော့ အစိုးရ အနေနဲ့ ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံတွေ အပေါ် ၀န်ထုပ်၀န်ပိုး ဖြစ်စေမယ့် အစား သက်သာစေဖို့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေက လွတ်နေတဲ့ ကုတင်တွေမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေကို ထားသင့်တယ်လို့ ပန်ကြားထားပါတယ်။
တကယ်လို့ လူနာ အရေအတွက် မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံတွေမှာ မနိုင်မနင်း ဖြစ်ခဲ့ရင် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကုတင်နေရာတွေ ငှားရမ်း အသုံးပြုသွားမယ့် မတ်လ ၁၅ရက် နေ့က ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့တွေနဲ့ စတင် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုနေပြီလို့ အစိုးရက ပြောပါတယ်။
GMB သမဂ္ဂ ကတော့ အဲဒီ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှာ လွတ်နေတဲ့ ကုတင်တွေကို ပြည်သူပိုင် ဆေးရုံတွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ပေးဖို့ ပန်ကြားထားပါတယ်။
လူထု အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်ရောက်နေပြီမို့ ဒါတွေကို အကျိုးအမြတ် ကြီးထွားလှတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှာ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း အတွက် အသုံးမချသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တိုးလာတာနဲ့ အမျှ စောင့်ကြည့်လူနာ တိုးလာ
၃။ ကားစက်ရုံတွေမှာ အသက်ရှူစက် ထုတ်မယ်
တကယ်တန်း လူနာတွေ ထောင်နဲ့ချီ ကျလာရင် သူတို့ကို အသက်ရှူစက်တွေ တပ်ပေးဖို့ ဘယ်ကနေ ရနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အမေးကိုတော့ လက်ရှိ အနေအထားမှာ လူနာ ငါးထောင်အတွက် အသက်ရှူစက် ယူကေမှာ ရှိထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ် နိုင်တင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် လူနာတွေ ပြုံကျလာရင်တော့ အသက်ရှူစက် အများအပြား လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာ ဟန်းကော့ခ် က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အခြေအနေ ဆိုက်ခဲ့ရင် စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေ ကားထုတ်သူတွေကို အကူအညီ တောင်းမှာလား လို့ ဘီဘီစီ ရဲ့ အမေးကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးက ဖြေကြားရာမှာ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေ အားလုံးနဲ့ အစိုးရက စကားပြောနေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အရည်သွေးမြင့်တဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်းတွေ ရှိတယ် ၊ နိုင်ငံအတွင်း စက်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်နိုင်သူတွေကို အစိုးရ အနေနဲ့ အသက်ရှူစက် ထုတ်ပေးကြစေ လိုတယ်လို့ သူက ထပ်လောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ်။
တကယ်လို့ ပြည်တွင်းမှာ လိုအပ်တာထက် အသက်ရှူစက်တွေ ပိုထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် ဒါတွေကို ပြည်ပက အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ ပို့ဆောင် ပေးသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ဟန်းကော့ခ် က ပြောပါတယ်။
ယူကေ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးပြီ
အသက်ရှူစက်တွေ ထုတ်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်မလားလို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်က အကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ မြေတူးစက်တွေ ထုတ်တဲ့ JCB ကုမ္ပဏီ က အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည် အကြပ်အတည်း ဆိုက်နေချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဘယ်လို အကူအညီမျိုးကို မဆို ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ လတုန်းက ထုတ်လုပ်မှု ရပ် အလုပ်ချိန်တွေ လျှော့ချ ထားရတဲ့ JCB ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ လော့ဒ် ဘမ်ဖို့ဒ် က ပြောပါတယ်။
ခါးနဲ့ ဒူးခေါင်းလို အရေးတကြီး လိုအပ်မှု မရှိတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကို ရွှေ့ဆိုင်းထားမယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးပြော
၄။ ခွဲစိတ်ခန်းမှသည် ဆေးရုံ လူနာဆောင် ဆီသို့
အရေးကြီး ကုသစရာ မလိုတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကို ဖျက်သိမ်း လျှော့ချပစ်တာဟာလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာမယ့် လူနာ ကုတင် လိုအပ်ချက်ကို အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မစ္စတာ ဟန်းကော့ခ် က ပြောပါတယ်။
ခါးနဲ့ ဒူးခေါင်း ခွဲစိတ်မှုတွေ အပါအဝင် တချို့ ကုသမှုတွေဟာ အခုလို အရေးပေါ် အချိန်မှာ ဆိုင်းငံ့ထားလို့ ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းတွေဟာ အောက်စီဂျင် ပေးစက်တွေ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒါတွေကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာဆောင် အဖြစ် ပြောင်းသုံးပစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို အစီအစဉ်ကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မကြာခဏ လက်ဆေး ၊ ချောင်းဆိုးရင် ပါးစပ်အုပ်ထားပြီး မျက်နှာကို မကိုင်မိစေဖို့က အရေးကြီး
၅။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း အဟောင်းကနေ အသစ်ဖြစ်လာမယ်
တကယ်တန်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေ အများအပြား ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် လေ့ကျင့် သင်ကြားထားတဲ့ သူနာပြုနဲ့ ဆရာဝန် အလုံအလောက် မရှိတာကတည်း ပြဿနာ တရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ အနေနဲ့ လတ်တလော အငြိမ်းစား ယူထားတဲ့ ဆရာဝန် တွေကို ပြန်ပြီး အလုပ်ခွင် ဝင်စေလိုတယ်လို့ မစ္စတာ ဟန်းကော့ခ် က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဗစ် နိုင်တင်း ရောဂါ လိုအပ်ချက် အတိုင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း တချို့ကို သက်ဆိုင်တဲ့ လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးက ဆိုပါတယ်။
အသက်ရှူစက်လို ပစ္စည်းကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ်နိုင်အောင် ၊ တခြား လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ကာ ၊ ဒီလို ကိစ္စတွေနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် မရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ပြန်လည် လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ် ၊ ဒါကို တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဖော်ဆောင် သွားမှာ ဖြစ်လို့လည်း သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဟော်တယ်ခန်းတွေကို လူနာဆောင်ပြောင်းပစ်မယ့် ယူကေရဲ့ ပြင်ဆင်မှု